Allgedo.com » Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 7 maalmood kaddib ku guuleysashadiisii madaxweynaha Soomaaliya
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 7 maalmood kaddib ku guuleysashadiisii madaxweynaha Soomaaliya
Print here| By: allgedo.com: Tuesday, September 18, 2012 // 1 Jawaab
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa la doortay Isniin, September 10, 2012, asaga oo wareegii labaad ee tartanka madaxweyne-nimo uga adkaaday Shariif Sheekh Axmed oo ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya, waxaana la dhaariyay daqiiqado yar un kaddib markii uu guuleystay, waxaana xafladdii caana shubkiisa ay dhacday Axad, September 16, 2012.
Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo xilka madaxweyne-nimada haya 2 maalmood oo kaliya, ayaa waxaa Arbaco, September 12, 2012 laba qarax lala beegsaday Hotel Jazira oo uu madaxweynaha ka deganaa magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ku dhinteen shan askari oo saddex ka mid ah ay ahaayeen ciidamada Soomaaliya, labana ay ahaayeen ciidanka AMISOM.
Sidoo kale, waxaa iyana halkaas ku dhintay laba ruux oo uu mid ahaa raggii weerarka soo qaaday iyo qof rayid ahaa.
Wararka ayaa waxaa ay sheegeen in dhaawacii ka dhashay labadaas qarax ay ku jireen dad rayid ah oo aan tiradooda la sheegin iyo saddex askari oo ka tirsan ciidamada AMISOM.
Xilligii uu qaraxu dhacayay ayaa waxaa Hotel Jazira ka socday shir laba geesood ah oo ay lahaayeen Soomaaliya iyo Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Kenya oo ay goob joog ka ahaayeen wafdi ka socday Midowga Afrika.
Dhinaca Soomaaliya shirka waxaa uga qeyb galayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra’isal wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo mas’uuliyiin kale, halka ay dhinaca Kenyana uga qeyb galayeen wafdi uu hogaaminaayay Sam Ongeri oo ah Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dalka Kenya.
Xiliga ay qaraxyadu dhacayeen waxaa hadlayay madaxweyne Xasan Sh. Maxamuud, mana jiraan wax dhibaato ah oo asaga iyo mas’uuliyiintii kale ee uu shirku u socday soo gaaray.
Weerarkaan ayaa waxaa sheegtay in ay ka danbeeyeen Al-shabaab oo ah urur diimeed si weyn uga soo horjeeda dowlad cilmaani ah (secular state) oo ka dhalata Soomaaliya iyo waliba ciidamada ajnabiga ah ee Soomaaliya gacanta ku siinaya sidii dhulka ay xoogagga mucaaradka ah haystaan xoog looga saari lahaa.
Wareysiga hoose waxaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka qaaday Seynab Abuukar oo ah weriyaha VOA ee magaalada Muqdisho, waxaana la qaaday Sabti, September 15, 2012.
Halkaan ka dhageyso wareysigii ugu horeeyay ee Af-Soomaali ah ee ay VOA la yeelatay madaxweynaha
Aden A. Colujoog, AOL’s Editor-In-Chief.
1 Jawaab " Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 7 maalmood kaddib ku guuleysashadiisii madaxweynaha Soomaaliya "
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ah Madaxweynaha Dowladda Federalka ah ee Soomaaliya Mudada Afarta Sano ah ee soo socoto.